Afrikaa Lixaa Keessatti Lootee-seentonni 100 Caalan Ajjeesamuu Humni Gamtaa Naannichaa Beeksise
Ebla 18, 2022
FAAYILII - Humnoonni waraanaa Naayjeeriyaa naannoo hidhattootani namni tokko itti ajjeefame yeroo to'atan, Guraandhala 16, 2019.
Waraanni Naayjeriyaa, Nijeer fi Kaameeruun tokkummaan duula gaggeessaniin ajajoota waraanaa 10 dabalatee lootee seentoota Islaamaa 100 caalaa ajjeesuu isaanii Dilbata kaleessaa ibsanii jiru.
Kunis torbanneen dabran muraasa keessatti haleellaa lafoo fi samii irraan kutaa Leek Chaad jedhamu keessatti gaggeessaniin ta’uun ibsamee jira.
Looltonni Bokoo Haaraam fi kan isa irraa adda ba’e Islaamiik Isteetes kan kutaa Afrikaa dhiyaa keessatti waggaa 10 caalaaf waraana Naayjeriyaan walitti bu’aa kan turan yoo ta’u kunis gara kutaalee naannootti ce’e jira.
Waraana biyyoota sadeeniif dubbii himaa kan ta’an Koloneel Muhammad Dool akka jedhanti naannoo Leek Chaad jedhamu keessatti bakka dhokotaa lootee seentonni to’atan keessa seenuun, meeshaa waraanaa, Nyaataa fi dawaalee seeraan alaa to’achuun danda’amee jira.
Duullii kun yoom akka gaggeeffamee fi looltonni meeqa akka jalaa ajjeefaman kan hin ibsine Dool garu lootee seentoota dheessaa turaniin dhuka’aa awwaalameen looltonni 18 madaa’uu ibsan.
Lootee seentonni Islaamaa Naayheriyaa Kaaba bahaa keessatti kan hedduumaatana yoo ta’u, namoota kuma hedduu ajjeesuun, miliyoona hedduu immo manaa fi qe’e irraa godaansisuun, achuuma biyya keessatti mooraa tti galanii jiraataa jiru.
Yunaaytid Isteetes torban dabree meeshaan waraanaa Doolaara Biliyoona tokkotti tilmaamamuu Naayjeeriyaatti akka gurguramuuf eega raggaasiiftee booda, biyyattiin jajjabaataa jirti. Seera tumtoonni Amerikaa mootummaan Naayjeriyaa dhiitaa mirga namoomaa dhaqqabsisuu mala yaadoo jechuun ituu hin kennamiin akka turu taasisanii turan.
Ibsa KFO fi deebii ABIN kenne caqasa
Bakkawwan Hidhattoonni Socho’anitti Rakkoo Nageenyaa Furuuf Hojjetaan Jira, Jedha Mootummaan Naannoo Oromiyaa
Hidhattoonni Gumuz Mootummaa Waliin Dhiheenya Araara Mallatteesineyyuu Tarkaanfiin Mootummaa Itti Fufee Jira, Jedhu